Zvinogumbura Sweatpants Zvinokonzera Huge Stir Kubva kuSpain kuenda kuChina nekunze
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Fashoni Nhau » Zvinogumbura Sweatpants Zvinokonzera Huge Stir Kubva kuSpain kuenda kuChina nekunze
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • China Kuputsa Nhau • tsika nemagariro • Fashoni Nhau • nhau • Spain Kuputsa Nhau • UK Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau
Masweat anonyangadza - Mufananidzo wakakodzera balenciaga.com
Bhandi regrey sweatpants iri kukonzera bruhaha nekuti vazhinji vari kuti dhizaini yavo inofungidzira uye ine rusarura. Usambofa wakafunga kuti vaviri vacho vanodhura angangoita $ 1200. Izvo zviri pachena hazvisi zvakawanda zvekushungurudzwa nezvazvo.
Asi kana iwe uri mutema weAmerica, kutengesazve chakadai chipfeko kunogona kutorwa sekusarura.
Chii chiri nezve aya chaiwo sweatpants ari kukwiza vanhu vazhinji nzira isiriyo?
Nhoroondo inotsanangura here mamiriro ari kutorwa nevamwe kurwisa mugadziri wekupfeka nezvechisarudzo chekushambadzira mabhurugwa aya, vachitsanangura kusagadzikana kwevanhu?
Chii chinoita kuti sweatpants igumbure zvakadaro? Ngatidzokerei munhoroondo zvishoma kuti titsanangure izvi.
Dhizaini yacho inotora fashoni yekuve neyemabhokisi mapfupi anotarisisa kubva muchiuno uye ichiita nguo imwe yakabatana, zvichireva kuti yakavakirwa mukati.
Ichi chirevo chemafashoni chakatanga kumashure kuma1990, kunyanya neyemimhanzi hip hop duo Kriss Kross uyo aipfeka mabhurugwa avo - kumashure - pazasi pebhokisi ravo rakanga risina kuvakwa, asi rakabata. Kwete bhurugwa rekuseri chikamu asi bhurugwa rinodzengerera nevane tsiva vanoratidza chikamu.
Nenguva isipi yakava chiratidzo chemafashoni kune vechidiki vechitema veAmerica. Muma 2000s, zvisinei, dzimwe nyika dzeUS dzakapa mitemo inorambidza tsika yekupfeka zvipfeko nenzira iyi, asi vashoropodzi vakati izvi zvakasarura zvisina tsarukano vanhu Vatema.
Mimwe yemitemo iyoyo yakabviswa seAmerican Civil Liberties Union payakaona kuti semuenzaniso kuShreveport, Louisiana, vatevedzeri vemitemo vaishandisa mutemo uyu wemabhurugwa senzira yekunyepera kunanga vanhu vatema nekuvatsvaga nekuvapinza mutirongo.
Kusvika kuRusarura Chikamu
Saka kana wepamusoro-fashoni dhizaini Balenciaga akaisa maviri eaya akavakirwa-mumabhokisi mune bhurugwa yetrompe L'Oeil mutsetse, yanga isiri iyo iyo $ 1,190 mutengo wekutemera uyo vanhu vakagumburwa nawo, kunyange vamwe vari pa twitter vakapomera zita reti mwero miviri uye vakabvunza mutirauzi 'mutengo wepamusoro mutengo.
Izvo zvakataurwa nemumwe mushandisi weTikTok ndezvekuti mabhurugwa "anonzwa kusarura" nekuti ari kubvarura tsika dzeVatema. Iyi chaiyo TikTok, nenzira, pakupedzisira yakaverengerwa yakaonekwa pamusoro pe 1.6 miriyoni nguva. Kana mushandisi weTikTok Mr200m paakaona bhurukwa reBalenciaga richitengeswa muLondon ndokutumira vhidhiyo, mumwe munhu anogona kunzwika achiti: "Izvi zvinonzwa zvine rusaruro… Vakaruka vatambi vezvibhakera mukati mebhurugwa," kune mumwe munhu akataura achiti, "Vane ruzivo rwekutsvedza. ”
Paive nevamwe asi ivo vakati havana kuwana juzi jira kuva rusaruraganda. Kumwe kutaura kwakati kusona mabhokisi mumabhurugwa chinhu chakajairika muma90s.
Mufananidzo nerubatsiro rwe balenciaga.com
Balenciaga akati yaiwanzobatanidza zvidimbu zvewadhiropu muhembe imwe chete uye yakadudza mienzaniso inosanganisira "majean akarongedzwa pamusoro pemabhurugwa emumuti [uye] mahembe ane mabhatani akarongedzwa pamusoro pehembe," akatsanangura Chief Marketing Officer, Ludivine Pont. "Bhurukwa iri raTrompe L'Oeil raive kuwedzera kwechiratidzo ichocho."
apo kuongorora webhusaiti yeBalenciaga, ine zvokwadi ine zvimwe zvakabatanidzwa zvewadhiropu zvinhu zvakadai seKnotted Sweatpants ine yakavakirwa-mu sweatshirt yakasungirirwa-pa-chiuno kutaridzika… kwe $ 1,250. Iwo sweatpants anogona kukanganisa, nenzira, anoita kunge akanyangarika kubva pawebhusaiti husiku.
Dzimwe Nhoroondo dzeKufunga
Kwakatangira kweichi chirevo chemafashoni chemabhurugwa ari kugadzika chaiko chine nhoroondo yakasviba. Yakatanga apo vatema vakatanga kuitwa nhapwa muAmerica uye yakatorwa kubva kutsika inonzi "kusimudzira imbwa" kana "kupwanya mbudzi." Nepo mazwi aya pakutanga aireva kupingudza mabhiza emusango, varidzi veminda yekumaodzanyemba vakashandisa zvirevo izvi kureva zvakare tsika yeku "paza" vanoshora vatema varume varanda.
Varume vatema ava vaizoendeswa kunzvimbo yeruzhinji uko varanda vese vakagadzirwa kuti vatarise sezvo akarairwa kudzikisa bhurugwa rake uye kukotamira kumberi. Iye "tenzi" aibata zveutsinye murume uye otora bhandi rake mushure mezvo aine chinangwa chekubvarura bhurugwa rake. Izvi zvakamuita mucherechedzo we "busted" kana "kuputswa mukati" kudzivirira vamwe varanda kubva kuzviito zvekuzvidza.
Ino haisi nguva yekutanga mugadziri wefashoni kuyambuka mutsetse wehunhu. Makore mashoma kumashure, Spanish yakasarudzika fashoni simba reimba Loewe akaunza a nhema uye chena mitsetse shati netirauzi zvakaiswa (nehembe roga rinotengesa $ 950) sechikamu chekapuru yekuunganidza. Yakarondedzerwa seyakafuridzirwa nezana ramakore rechi19 rechirungu ceramicist William De Morgan.
Chipfeko ichi, zvisinei, chakakonzera gakava ipapo apo vanhu vakati chakange chisina kugadzikana zvakafanana neyunifomu dzaipfekwa nevasungwa vemumisasa yevasungwa yeNazi munguva yechipiri Hondo Yenyika.
Lingerie Brand Inobatsira Vakadzi Kuongororwa Zamu...
Svondo 16, 2021 pa 18: 41
Ndiani angatenga $ 1200 sweat bhurukwa, kunze kwegate-munharaunda, champagne socialist, uyo anonamata ghetto marara, asi asingaregere mari yekugara kure kure navo sezvinobvira?